अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जीवनका ६ प्रसंग, थाहा पाएपछि तपाईं हाँसो रोक्नै सक्नुहुन्न
एजन्सी । विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइनका कार्य संसारकै अद्भूत कार्यमध्ये पर्छन् जसले आज विश्वलाई नै कुनै तरिकाले मार्गदर्शन गरिहेको छ । उनको कार्य मात्र अद्भूत छैनन्, व्यक्तिगत जीवनका घटना र प्रसंगहरु पनि एकदमै रोचक र अद्भूत छन् । जसका केही पाटाहरु यस्ता छन्-
१. अल्बर्ट आइनस्टाइनका एकजना चालक थिए जो उनको हरेक भाषण भ्रमण तथा सम्मेलनमा साथै जाने गर्दथ्ये । यस कारण ती चालकलाई उनले दिने हरेक भाषण र वक्तव्यबारे कण्ठस्थ थियो । एकदिन त्यस्तै एक भाषणको क्रममा चालक र आइनस्टाइनले आ-आफ्ना भेष बदले र आइनस्टाइन चालकको सिटमा बसे भने चालक आइनस्टाइनको सट्टामा भाषण दिन गए । भाषणको क्रममा जब कुनै एक सहभागीबाट अफ्ट्यारो प्रश्न आयो तब चालकले चलाखीपूर्ण ढंगले भने, ‘यति सजिलो प्रश्नको उत्तर त मेरो ड्राइभरले पनि दिन सक्छ ।’ यति भनेर उनले आइनस्टाइनलाई बोलाए र उनले उक्त प्रश्नको उत्तर दिए ।
२. आइनस्टाइनलाई सधै उनकी श्रीमतीले काममा जाँदा औपचारिक कपडाहरु लगाउन आग्रह गर्थिन् । उनले सधै श्रीमतीसँग तर्क गर्दै भन्ने गर्थे, ‘मलाई सबैले चिनेकै छन् । किन राम्रो लगाउन पर्‍यो !’ एकदिन जब आइनस्टाइनले आफ्नो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा उपस्थित हुनुपर्ने भयो तब उनकी श्रीमतीले उनलाई राम्रो कपडा लगाउन बिन्ती गरिन् । तर श्रीमतीलाई उनले यस्तो जवाफ दिए, ‘मलाई त्यहाँ कसैले चिन्दैन किन राम्रो लगाउनु पर्‍यो ।’
३. आइनस्टाइनलाई धेरैजसो मानिसहरु ‘सापेक्षतावादको सिद्धान्तको’ बारेमा व्याख्या गर्न लगाउँथे । यसबारेमा उनी भन्ने गर्थे, ‘एक मिनेटको लागि तपाई आफ्नो हात तातो स्टोभमाथि राख्नुहोस् । त्यो एक मिनेट तपाईलाई एक घण्टा बराबर लाग्छ तर, तपाई एकजना राम्री केटीसँग एक घण्टा समय बिताउनुहोस् तर त्यो एक घण्टा तपाईलाई एक मिनेट बराबर लाग्छ । हो यही हो ‘सापेक्षतावादको सिद्धान्त ।’
४. कुनैबेला आइनस्टाइन प्रिन्सटन विश्व विद्यालयमा अध्यापन गर्थे । एकदिन अफिसबाट घर फर्कने क्रममा उनले आफ्नो घरको ठेगाना नै बिर्से । उनले एकजना ड्राइबरसँग आइनस्टाइनको घर कहाँ हो भनी सोधे । ती चालकले आइनस्टाइनलाई चिन्दा रहेनछन् । त्यसैले उनले आइनस्टाइनलाई प्रिन्सटनभरीका सबै मानिसहरुलाई आइनस्टाइनको घर थाहा भएको बताउँदै उनलाई आइनस्टाइन भेट्न चाहेको हो भनी प्रश्न गरे । जब उनले आफू नै आइनस्टाइन भएको बताए तब बिना गाडी भाडा नै ती चालकले उनको घर पुर्‍याइदिए ।
५. आइनस्टाइन एकपटक प्रिन्सटनबाट ट्रेनमा कतै जाँदै थिए । जब ट्रेनका कन्डक्टरले उनीसँग टिकट मागे तब उनले आफ्नो टिकट भेट्टाउन सकेनन्, तब कन्डक्टरले उनलाई आफूले आइनस्टाइनलाई चिनेको बताउँदै उनले टिकट लिएको आफूलाई विश्वास भएको बताए । उनलाई टिकटको लागि चिन्ता नलिन भने । त्यसपछि कन्डक्टर टिकट माग्दै अर्को कम्पार्टमेन्टतिर लागे तब फर्केर हेर्दा पनि महान् भौतिकशास्त्री अझैपनि आफ्नो टिकट खोजिरहेको देखेर उनले आइनस्टाइनको नजिक आएर भने, ‘डक्टर आइनस्टाइन मलाई थाहा छ तपाई को हुनुहुन्छ भनेर । त्यसैले तपाईलाई टिकटको आवश्यकता छैन ।’ त्यस समय आइनस्टाइनले कन्डक्टरलाई सम्झाउँदै भने, ‘ए भाइ ! यो त मलाई नि थाहा छ म को हो भनेर तर अहिले मलाई थाहा नभएको कुरा भनेको म कहाँ जादैँ छु भन्ने हो ।’
६. एकपटक आइनस्टाइनले चार्ली च्याप्लिनलाई भेटे । उनले चार्लीलाई भने, ‘म तपाईको कलाको प्रशंसा गर्दछु, यो एकदमै सुन्दर छ । तपाई एउटा शब्द पनि बोल्नु हुँदैन तर पनि संसारले तपाईलाई बुझेको छ ।’ त्यसको प्रतिक्रियामा चार्लीले भने, ‘तर तपाईको ख्याती त यो भन्दा नि माथि छ । विश्वले तपाईलाई यति हुँदा नि प्रशंसा गरेको छ, जब कसैले तपाईलाई बुझेको नै छैन ।’
देशभर एकैपटक धेरै संख्यामा सरकारी जागिर खुल्यो, अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने
काठमाडाैं, १४ माघ । देशभर एकैपटक ४७ हजार व्यक्तिलाई सरकारी रोजगारीको अवसर खुलेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि केन्द्रीय...